Iimpapasho ezimhlophe eziqhuba ukuThengisa: Iingcebiso ezi-5
Iingcebiso ekubhaleni amaphepha amhlophe aqhuba ukuThengisa
Veki nganye, ndikhuphela amaphepha amhlophe ndize ndiwafunde. Ekugqibeleni, amandla ephepha elimhlophe alinganiswa ngenani lokukhuphela, kodwa ingeniso elandelayo oyifumeneyo ukuyipapasha. Amanye amaphepha amhlophe angcono kunabanye kwaye bendifuna ukwabelana ngezimvo zam endikholelwa ukuba zenza iphepha elimhlophe kakhulu.
Iphepha elimhlophe Uphendula umba ontsonkothileyo eneenkcukacha kunye nedatha exhasayo. Ndibona amaphepha amhlophe anokuba yayiyiposti yebhlog. Iphepha elimhlophe ayisiyonto ofuna ukuba ifumaneke ngokulula kwi-Intanethi, ingaphezulu kunoko- ngaphezulu kweposti yebhlog, engaphantsi kwe-eBook.
Iphepha elimhlophe wabelana ngemizekelo evela kubathengi bokwenyani, amathemba, okanye ezinye iimpapasho. Akwanelanga ukubhala uxwebhu oluthi thesis, kuya kufuneka unikeze ubungqina obubambekayo.
Iphepha elimhlophe ukukholisa ubuhle. Iimpawu zokuqala zibala. Xa ndivula i-whitepaper kwaye ndibona iMicrosoft Clip Art, andifundi ngakumbi. Kuthetha ukuba umbhali akathathanga xesha… oko kuthetha ukuba ngekhe bathathe xesha ekubhaleni umxholo, nokuba.
Iphepha elimhlophe ayihanjiswa ngokukhululekileyo. Kuya kufuneka ndibhalisele yona. Uthengisa ulwazi lwakho ngolwazi lwam-kwaye kuya kufuneka undenze ukuba ndikhokele kwifomu yobhaliso efunekayo. Iifom zekhasi lokufika zenziwa ngokulula kusetyenziswa isixhobo esinjenge umakhi weefom online. Ukuba andizimisele ngesihloko, ngekhe ndikhuphele iphepha elimhlophe. Nikeza iphepha elikhulu lokufika elithengisa iphepha elimhlophe kwaye liqokelele ulwazi.
Iphepha elimhlophe elinamaphepha ama-5 ukuya kuma-25 kufuneka inyanzelise ngokwaneleyo kum ukuba ndikuthathe njengegunya nezixhobo zawo nawuphi na umsebenzi. Faka uluhlu lokutshekisha kunye neendawo zamanqaku ukuze zingafundwa ngokulula kwaye zilahlwe. Kwaye ungalibali ukupapasha ulwazi lwakho loqhakamshelwano, iwebhusayithi, ibhlog kunye nonxibelelwano lwasentlalweni ngaphakathi komzimba womsebenzi.
Kukho iindlela ezimbalwa zokwenza amaphepha amhlophe anyanzelisa ngokwaneleyo ukuqhuba ukuthengisa.
elubala -Iyokuqala kukucaca ngokucacileyo kumfundi ukuba uyisombulula njani ingxaki yabo ngokweenkcukacha. Iinkcukacha zigqityiwe, enyanisweni, kunokuba bakubize ukuba unakekele ingxaki kunokuba bazenzele ngokwabo. Ngaba abantu abazisebenzisayo bazakusebenzisa ulwazi lwakho ukuzenzela ngokwabo…. Sukuba nexhala… soze bakubizelele. Ndibhalile amaphepha ambalwa ekusebenziseni ibhlog yeWordPress- akukho kunqongophala kwabantu bandibizayo ndibancede bayenze.
isiqinisekiso -Indlela yesibini kukubonelela umfundi wakho ngayo yonke imibuzo kunye neempendulo ezikulungela njengobutyebi babo ngcono kunaye nawuphi na umntu. Ukuba ubhala iphepha elimhlophe "Ungamqesha njani uMcebisi ngezeNtlalontle" kwaye unikezela abathengi bakho ngezivumelwano ezivulekileyo abanokuzishiya nanini na… yenza elo candelo lephepha lakho mhlophe ekuxoxeni ngezivumelwano! Ngamanye amagama, inkxaso kunye nokudlala kumandla akho.
Shayela kuNyathelo -Ndimangalisiwe ngokwenene ukuba mangaphi amaphepha amhlophe endiwafundileyo apho ndigqibezela khona inqaku kwaye ndingenalo nofifi malunga nombhali, kutheni kufanelekile ukuba babhale ngesihloko, nokuba bangandinceda njani kwixesha elizayo. Ukubonelela ngokucacileyo ngeminxeba-yokwenza kwincwadi yakho emhlophe, kubandakanya inombolo yefowuni, idilesi, igama lakho lobuchwephesha kunye nefoto, iphepha lokubhalisa, iidilesi ze-imeyile… zonke ziya kuqinisa amandla okuguqula umfundi.
tags: UkuThengiswa kweMpahlaubhala njani iphepha elimhlopheamaphepha amhlophe okuthengisaWhitepaperiingcebiso zokubhala
ImfonomfonoAppTracking: I-SDK yeSelfowuni yokuFakela iZibonelelo
Amanqaku amakhulu, uDoug. Ndifumanise ukuba iinkampani ezininzi ezizama ukusebenzisa amaphepha amhlophe ukukhawulezisa inkqubo yokuthengisa zishiya ezimbini zezona zinto zibalulekileyo. Kuqala, ngaba bayayichaza ingxaki ebonakalayo kwindawo ebuhlungu nehambelana noko bakunika njengemveliso okanye inkonzo, kwaye okwesibini, yintoni ebenza bahluke? Akunakuba ngcono. (Umboleki uya kuthatha isigqibo sokuba, nokuba umthengisi usenokuthi kangaphi).
@freighter, andiphikisani ukuba kufuneka uchaze umahluko wakho- kodwa akukho mntu unyanisekileyo uyakholelwa kwinkampani ngokuthetha nje ukuba bahlukile. Kungenxa yoko le nto kubaluleke kangaka ukuphuhlisa umyalezo ofanelekileyo ngaphakathi kwiphepha elimhlophe. Ngokuchaza iziqinisekiso zemfundo, unokuzahlula!